Daawo sawirada Bandhig faneedkii Fanaanada Hibo Maxamed Cudoon “Hibo Nuura” – idalenews.com
Bandhig Faneed ay ka soo qeyb galeen Xildhibaanno iyo Wasiiro ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ciwaankeedu ahaa mustaqbalka iyo hiigsiga Soomaaliya marka la gaaaro sanadka 2035 ta ayaa xalay lagu qabtay magaalada Muqdsiho.
Xafladan ayaa ujeedadeedu waxaa uu ahaa in la soo bandhigo hiigsiga Soomaaliya marka la gaaro sanadka 2035 oo ah waxyaabahaasi oo ka mid ah horumarka lala doonayo in la gaarsiiyo dalkeena Soomaaliya iyo sida Soomaalida meel walboo ay joogaan uga hanweynyihiin in mar uun ay arkaan Soomaaliya oo dib ula soo laabata karaamadii ay ku laheyd aduunka intiisa kale.
Xafladan oo ay kasoo qeyb galeen wasiiro, Xildhibaano, Abwaanno, Fanaaniin qurba joog iyo qeybaha kala duwan ee bulshadda ayaa intii ay socotay waxaa goobta riwaayad soo wada jiidatay ka soo qeybgalaasha xafladan goobta kusoo bandhigay fanaaniinta qaranka ee hobolada Waaberi oo xusuus geliyay dadkii xafladda joogay, waxaana si weyn xalay fanaaniinta uga dhexmuuqatay fanaanada caanka ah ee Hibo Max’ed Hudoon (Hiba Nuura) oo goobta kusoo bandhigtay qeyb ka mid ah fankeeda. iyadoona Fannaanadda Caanka ah ee Hibo Maxamad Huddoon “Hibbo Nuurra” oo ka mida Hobaladda Waabari ay halkaasi ku soo bandhigtay Hees qiiro galisay dadkii ku sugnaa Bandhigaasi.
Halku dhigyo ay ka mid yihiin sawiro ka turjumaya muqdisho shalay sida ah aheyd iyo sida la doonayo in ay noqoto marka la gaaro sanadka 2035, wax soo saarka dalka waa xalka dhaqaale ee dalka iyo sidoo kale sawir muujinaya Tareen Deg deg ah dalka oo dhan isaga goosha taasoo dadkii waaya jooga ahaa ee xafladda kasoo qeyb ay xusuus gelisay.
Riyaawadii kooxda Qaranka ee hobolada Waaberi ay xalay kusoo bandhigeen xafladan ku saabsaneyd Hiigsiga Soomaaliya marka la gaaro sanadka 2035, oo fikradeedu uu iska lahaa xildhibaan Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow oo ka tirsan mudaniyaasha baarlamaanka Soomaaliya markii ay idlaatay kadib ayaa waxaa loo guda galay qudbadihii madaxdii xafladda kasoo qeyb gashay.
Maareeyaha Golaha Murtidda, Madadaaladda, Fanka iyo Farshaxanka, Abwaan Cabdi Dhuux Yuusuf oo ka hadlay gababadii Bandhigga ayaa ka codsaday Dawladda Somalia in loo fududeeyo fanaaniinta inay Riwaayadan dalka oo dhan gaarsiiyay.
Ugu horeyn wasiirka arimaha gudaha iyo amniga qaranka Soomaaliya mudane C/kariin Xuseen Guuleed oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in dowladu ka shaqeyneyso horumarka dalka, isagoo rajo wanaagsan ka muujiyay in hiigsigaasi uu hirgelidoono. Wuxuuna sidoo kale Wasiirku ballan qaaday in Riwaayadan la gaarsiin doono Gobaladda Dalka oo dhan, isagoo sidoo kale soo dhaweeyay soo guryo noqoshadda Fanaanadda Qaran Hibbo Nuurra.
Sidoo kale wasiir ku xigeenka wasaaradda warfafinta Soomaaliya mudane C/shakuur Cali Mire ayaa sheegay in Riwaayadii ay soo bandhigeen fanaaniinta Qaranka ee hobolada Waaberi ay ka turjumeyso in Soomaalida lagu yaqaano ka faa’ideysiga wax soo saarka dalkooda.
Hiigsiga horumarka Soomaaliya ayaa la rumeysanyahay haddii meesha laga saaro xagjirnimada liddiga ku ah amniga, iyadoo dowlada dhankeedana ay dhowr jeer ku celcelisay in ay ka sheyneyso hoeumarka dalkeena Soomaaliya.
Maamulka Puntland oo wax laga xumaado ku tilmaamay Weerarki lagu qaaday Axmed Madoobe